Beeraha beeraha ee Ukraine ee 2016 ayaa lagu qiyaasay $ 15 bilyan
Sanadkii la soo dhaafay, Ukraine waxay soo saartay beeraha iyo cuntooyinka cuntada ah oo qiimahoodu yahay $ 15.5 bilyan, taasoo ka dhigan 42.5% dhammaan dhoofinta. Sida laga soo xigtay Wasiir Ku-xigeenka Siyaasadda beeraha ee Ukraine, Olga Trofimtseva, dhoofinta Ukraine ee waxsoosaarka beeraha ayaa kor u kacay 4.5% marka la barbardhigo 2015.
Mushaarada Agrarians waxay ku dhowaad labanlaabantay
Mushaharka celceliska shaqaalaha ee beeraha, warshadaha iyo kalluumeysiga ayaa ka kordhay UAH 3,283 ilaa UAH 4,956 (51%) laga bilaabo Jannaayo ilaa Disember 2016. Sida laga soo xigtay Guddiga Tirakoobka Gobolka, marka la barbardhigo Diseembar 2015, xaddiga mushaarka ayaa kordhay 29.9%. Bishii Jannaayo-Disembar ee sanadkii hore, mushaharka shaqaalaha beeraha ayaa kordhay 3,054 hryvnias ilaa 4,417 hryvnias.
Qiimaha badeecadaha ee Janaayo ayaa ahaa kii ugu sarreeyey
Sida laga soo xigtay guddoomiyaha Ururka Yukreeniyaanka ee shirkadaha Uk, Aleksey Doroshenko, qiimaha badeecadaha ee Jaantuska ayaa ahaa mid sareeya. Waxa uu ka faallooday xaaladda: "Golaha Wasiirrada, oo 8% sicir-barar ku samaynaya miisaaniyadda 2017, laguma xisaabin qiimaha badeecadaha iyo alaabooyinka bilowga sanadka.
Baradho aan caadi ahayn ayaa u muuqday Ukraine
Suuqa Ukriga ah, baradhada midabka leh ayaa weli ah mid cusub oo aan caadi ahayn, taas oo keenaysa dulsaar. Laakiin weli Machadka Macaanka ee Botato ayaa muujiyey natiijooyinka baaritaanka barandhada, oo ah laba nooc oo baradho ah oo leh midabo midab leh oo ah digriiga. Midka ugu horreeya waxaa loo yaqaan Solokha, jidhka kaas oo ah buluug, iyo labaad, Khortytsya, oo leh qalab casaan ah.
Wax soo saarka beeraha bani-aadmiga ee Ukraine ayaa ballaariya
In Ukraine, waxay dooneysaa in ay dhisto saddex warshadood oo loogu talagalay soosaarka wax soo saarka noolaha oo ku saleysan bakteeriyada carrada. Sida laga soo xigtay xogta laga helay Waaxda Xiriirka Dadwaynaha ee Wasaaradda Beeraha iyo Horumarinta Warshadaha Gobolka Volyn Maamulka, mid ka mid ah saddexda dhirta ayaa lagu dhisi doonaa gobolka Volyn.
Midowga Yurub wuxuu bilaabi doonaa inuu helo xisbiga of goosashada cusub ee qajaarka Yukreeniyaan
Toddobaadkan, kuwa dhoofiya Ukrain ayaa isku dayaya in ay bilaabaan bixinta qajaarka Ukriga ah ee Midowga Yurub. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha Yukreeniyaanka ah ee horay usocday sahayda khudaarta EU-da, ayaa ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin dhoofinta. Tani waxay inta badan ku saabsan suuqa Polish. Sida laga soo xigtay suuqyada warfaafinta ee Info-Shuvar, maaha inay fiiro gaareyso qiimaha sarreeya, macaamiisha yurubiyanku waxay hore u xiiseynayaan qajaarka Ukriga ah, sidaas awgeed, alaab-qeybiyeyaasha Ukraine waxay si firfircoon uga gorgortamayaan koriyo si ay u diyaariyaan wax soo saarka, sida ku cad shuruudaha macaamiisha Yurub.
Sannadka 2016, beeralayda Tansaaniya waxay iibiyeen wax soo saarka beeraha Midowga Yurub oo ah $ 4.2 bilyan, taasoo 1.6% ka badan marka la barbardhigo 2015, ayuu yiri agaasime kuxigeenka shaqada cilmiga sayniska Machadka Qaran ee Dhaqaalaha Beeraha, xubin ka tirsan Machadka Qaranka ee Beeraha, Nikolai Pugachev.
Qiimaha iibka caanaha Uk ayaa kor u kacay 50% bishii Janaayo
Sida laga soo xigtay xogta Waaxda Xiriirka Dadwaynaha ee Ururka Caanaha Qalabka Caanaha, qiimaha iibka caanaha ee Ukrayna ee bisha Jannaayo sanadkan marka la barbardhigo Janaayo 2016 ayaa kordhay 50%. Waxaa la soo sheegay in qiimaha celceliska caanaha fasalka dheeraadka ah ee sanadka uu kordhay 49% - 9.43 UAH / halkii litir (oo ay ku jirto Canshuurta).
Bishii Febraayo, Ukraine waxay buuxin doontaa qoondaynta canshuuraha aan dhoofin ee hilibka digaaga ah iyo hadhuudhka EU-da sannadka 2017
Bishii Febraayo, Ukraine ayaa si buuxda u buuxin doonta qoondaynta sanadka 2017 si loogu dhoofiyo hilibka digaaga ee Midowga Yurub, Febraayo 2, wasiirka beeraha iyo raashinka Ukraine Taras Kutovoy. Sida laga soo xigtay isaga, ilaa bartamihii Febraayo, Ukraine ayaa xiraya quotas for hilibka digaaga. Intaa waxaa dheer, waddanku wuxuu horeyba u buuxiyey qotasyada siinta hadhuudhka.
Halista khatarta waa la goosan karaa
Tan iyo fiidkii shalay, heerkulku wuxuu bilaabmaa inuu ku dhaco Ruushka iyo Ukraine iyo saadaalinta cimilada saadaaliyo dhowr habeen oo qabow kahor dhammaadka todobaadkan. Bartamaha Ukraine, sida laga soo xigtey saadaasha, heerkulka ayaa hoos u dhacay -11C shalay wuxuuna ku dhici doonaa -20C berrito iyo maalmaha soo socda. Xaalad la mid ah ayaa ka soo korodhay qaybta dhexe ee Ruushka ee ku yaalla Kursk, Voronezh iyo Lipetsk, halkaa oo -24C habeenkii la diiwaan geliyay habeenkii oo la qaboojiyey -26C berrito.
Taageerada dawladaha beeralayda ah ee Ukrain ayaa gacan ka geysanaya kordhinta soo saarista beeraha
Taageerada dowladda ee beeralayda yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa u oggolaanaysa Ukraine in ay kordhiso soosaarka beeraha iyada oo ku dhawaad ​​10 milyan oo tan halkii sannadkii, ayuu yiri Taras Kutovoy, Wasiirka Beeraha iyo Cuntada. Sida laga soo xigtay isaga, Wasaaraddu waxay cadeyneysaa in ay jiraan ganacsiyo yaryar oo dhexdhexaad ah oo beeraha ah kuwaas oo ay tahay in ay hareeraan dhismaha taageerada dawladda.
Cuntada Ukraine ee u dhoofisa Imaaraadka Carabta ayaa aad u deg deg ah.
Dhoofinta cuntooyinka Yukreeniska ee sannadihii la soo dhaafay ayaa muujinaya isbeddel xun oo xilligan la joogo wax ka yar 1% dakhliga dhoofinta. Tani waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay dhibaatooyinka haysta shahaadada "Halal", oo bilaabay in la dareemo sannadkii hore.
Wasaaradda Beeraha ee Ukraine waxay soo gudbisay 11 biil
Shalayto, Wasaaradda Beeraha ee Ukraine ayaa 11 biilood u gudbisay Verkhovna Rada si loogu tixgeliyo, taas oo loo qaadan karo sharci ahaan. Lixda biilasha la soo gudbiyay, toddoba ayaa horeba dib u eegay guddiyada Verkhovna Rada waxayna kugula taliyeen in ay korsadaan. Sharciga ugu horreeya waa jaan-gooynta khamriga, gaar ahaan tan, taasi waxay ka dhigan tahay in gaar-ahaanshaha khamriga dawladda Ukrspirt, oo soo saara khamriga iyo warshadaha warshadaha, taas oo ah ganacsi si caqligal ah u leh Ukraine.
Midowga Yurub ayaa qorshaynaya in la yareeyo qoondaynta sahayda bilaashka ah ee bilaha Ukriga ah
Sida laga soo xigtay Wasiirka Beeraha iyo Cuntada Ukraine ee Taras Kutovogo, maanta Guddiga Yurub ayaa ka wada hadlaya suurtagalnimada in la yareeyo qoondaynta sahayda bilaa lacag la'aanta ah ee hadhuudhka laga bilaabo Ukraine. Waa in la ogaadaa tan iyo bilowgii 2017, Ukraine ayaa horayba u buuxsantay kootada si loogu beero hadhuudhka EU-da ee heerkulka 400,000 tan.
Shirkadda Allseeds Black Sea waxay bilaabaysaa mashruuc sahayda ah oo loogu talagalay ka-soo-baxa saliidda
Sida laga soo xigtay war-saxaafadeedka shirkadda, bishii Febraayo 2017, shirkadda Allseeds Black Sea ayaa bilaabi doonta hirgelinta mashruucyadeeda saadka ah ee ku-meel-gaadhka ah ee saliidda ayadoo adeegsanaysa qalabkeeda wax-soo-saarka Koonfurta Dekadda, oo ku yaal Odessa. "Waxaa jiri doona saddex waji oo mashruuc ah.
Wasiirka Beeraha ee Ukraine ayaa la kulmi doona wakiillo ka socda Bangiga Adduunka
Wasiirka Beeraha Ukraine ayaa maanta la kulmi doona wakiillo ka socda Bangiga Adduunka si looga wada hadlo xaaladda hadda jira ee warshadda kaynta ee Ukraine iyo baahida loo qabo dib-u-habeyn dhamaystiran. Wasiirka ayaa xusay in dib-u-habaynta xayawaanka waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee howlaha wasaaradda, laakiin tani waa mid muran badan oo ka adkaata aragtida xasaasiga bulshada, fikrado badan, kala-sooc iyo faallooyin.
Shirkadda Deeqaha Gobolka ee Ukraine ayaa ka fogaatay midaynta
Wasiirada Arrimaha Dibada ee Ukraine ayaa go'aansaday in ay ka saaraan shirkad wadaag ah oo ka mid ah shirkadda raashinka iyo tan Cuntada ee Ukraine ee liiska hantida gobolka ee sannadkii 2017. PJSC, oo loo yaqaano SCRPU, ayaa la aasaasay sannadkii 2010, sida laga soo xigtay boggooda, waa shirkadda ugu awoodda badan ee gobolka oo leh awoodda beeraha iyo waa hoggaamiye kaydinta, ka shaqaynta, gaadiidka iyo dhoofinta hadhuudhka.
Guul weyn oo muhiim ah oo loogu talagalay soo saarayaasha jimicsiga ee Ukraine
Horumarinta qaybta dabiiciga ah ee Ukraine ayaa tallaabo wanaagsan ka qaaday shalay, markii Guddiga Siyaasadda Beeraha ay ku taliyeen Verkhovna Rada in ay taageerto qabyada qoraalka ah ee akhrinta kowaad. Hase yeeshee, hadda ma cadda in hirgalinta sharciga qabyada ah uu yahay mid rasmi ah, ama weli waa la diidi karaa Verkhovna Rada.
Mareykanka ayaa ka wada xaajoonaya soo dejinta ukunta beeraleyda ee Ukriga ah
Waddanka Maraykanka ayaa diyaar u ah inuu ka wada xaajoodo sidii loo siin lahaa sahayda caanaha Ukriga ah ee ku yaala suuqa gudaha, ayuu yiri Wasiirka Beeraha iyo Raashinka Ukraine Taras Kutovoy. Sida laga soo xigtay isaga, Maraykanka ayaa leh sharciyo aad u nidaamsan oo ku saabsan amniga cuntada sababtoo ah taasi waa arrin aad u adag in lagu soo bandhigo waxyaabaha cusub ee suuqa.